မြန်မာတို့သွေး မျိုးချစ်ရေး – မတ်လ ၂၈ ၁၉၉၈ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ကဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » မြန်မာတို့သွေး မျိုးချစ်ရေး – မတ်လ ၂၈ ၁၉၉၈ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ကဗျာ
မြန်မာတို့သွေး မျိုးချစ်ရေး – မတ်လ ၂၈ ၁၉၉၈ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာပါ ကဗျာ
Posted by kai on Jul 7, 2010 in Critic, Poetry, Politics, Issues |4comments
မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ ( မတ်လ ၁၈ ၁၉၉၈ ) ကဗျာ
ကဗျာကို သေချာဖတ်နိုင်ဖို့ ပုံကိုကလစ်လုပ်ကြည့်ပါ။
၁၉၉၇ ဧပြီလထုတ် မဂ္ဂဇင်းပါပြီးသား ကဗျာတပုဒ်ကို နောင်တနှစ်လောက်အကြာမှာ မြန်မာအစိုးရအာဘော်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာ ထပ်မံဖေါ်ပြတဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ ကဗျာကို မဂ္ဂဇင်းတခုခုမှာ ဖေါ်ပြခဲ့တာဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မရှိတာမို့မသိသာပေမဲ့ (အစိုးရလုံးဝထိမ်းချုပ်ထားတဲ့)နိုင်ငံတော်အဆင့် သတင်းစာမှာ ထပ်မံဖေါ်ပြတာဟာ အစိုးရအာဘော်လို့ ယူဆနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်ရဲ့ မတ်လ ၂၇ရက်နေ့ဟာ တပ်မတော်နေ့(တော်လှန်ရေးနေ့)ဖြစ်တာမို့မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖေါ်ပြတာဟာ တပ်မတော်သားအများစု သတိထားဖတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်မယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
အခုကဗျာကို မြန်မာ-အမေရိကန်များဖတ်ပြီး ကိုယ့်အမြင်ကို ကောက်ချက်ချ၊ မှတ်ချက်ပေးလိုတာပါပဲ။
( ဒီကဗျာကို နောက် ၁၂ နှစ်ကြာမှ ဘာလို့ဝေဖန်သုံးသတ်ဖို့ တင်နေရသလည်းဆိုတော့ …အခုမှ အီးမေးလ်ကရပြီး Hot (ပူ)လာလို့ဖြစ်ပါကြောင်း..)
I am not sure why you want to renew the dead poem long time ago. If you think it recently gets hot (via email),junta feel more heat regarding Daw Suu’s popularity among the people. Junta will not only feel heat but will be burnt out by the love of people on Daw Suu.
အကြောင်းအရာက လည်း ကျဉ်းမြောင်းသေးသိမ်ပါတယ်။
သီပေါ သမီးတွေက စလို့ ကုလားယူတာပဲလေ။
လူတစ်ဦးချင်းစီ ရဲ့စိတ်ခံစားမှု ကိုလိုက်ပြောနေတာထက်
လူမှု အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စံနှုန်းတွေ ကို မြှင့်တင်ပေးမှ တကယ့်အမျိုးသားရေး ဖြစ်ပါတယ်။
စံနှုန်းမြင့်လာရင် ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ သေမနေရင် အမျိုးသားရေးဆိုတာ အမြဲစိတ်ထဲမှာ တောက်ပနေကြမှာပါ။
ဟုတ်ပ ကဗျာကအမြင်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းတယ် လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်က ကပြား ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာနေပြည်သူတွေနဲ့တသားထဲရှိတယ်သစ္စာရှိတယ် တယောက်ကမြန်မာစစ်စစ်ကြီးဒါပေမဲ့အာဏာရူးဖြစ်နေတယ် ပြည်သူတွေကိုလဲရန်သူလိုဆက်ဆံတယ် အသင်ဘယ်သူကိုရွေးဆက်ဆံမလဲ?……အမေရိကန်မှာ အိုဘာမားကိုသမ္မတအဖြစ်ပြည်သူတွေကရွေးချယ်လိုက်တာသိတယ်နော်…………